Uzozibona kanjani futhi nini izibani zaseNyakatho zaseNorway | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Uzozibona kanjani futhi nini izibani zaseNyakatho zaseNorway
Cishe wonke umuntu uzwile noma wabona i-aurora borealis ezithombeni. Abanye babe nenhlanhla yokubabona mathupha. Kepha abaningi abazi ukuthi zakhiwa kanjani nokuthi kungani zakhiwa. Enye yezindawo ezifanele kakhulu emhlabeni ukubona i-aurora borealis yiNorway. Ngalesi sizathu, kuba yindawo ephezulu yezivakashi ukubona lo mcimbi omuhle wemvelo.
I-aurora borealis iqala ngokukhanya kwe-fluorescent emkhathizwe. Ngemuva kwalokho kuyancipha bese kuvela i-arc ekhanyayo evala kwesinye isikhathi isiyingi esikhanyayo kakhulu. Kepha yakhiwa kanjani futhi umsebenzi wayo uhlobene kanjani? Ngabe ufuna ukwazi konke mayelana namalambu aseNyakatho eNorway?
1 Ukwakhiwa kwezibani zaseNyakatho
3 Imiphumela ye-aurora borealis
4 Izibani zaseNyakatho eNorway
5 Ungabona nini
Ukwakhiwa kwezibani zaseNyakatho
Ukwakhiwa kweLights Lights kuhlobene nomsebenzi welanga, ukwakheka kanye nezimpawu zomkhathi womhlaba.
Izibani ezisenyakatho zingabonwa endaweni eyisiyingi ngenhla kwezigxobo zoMhlaba. Bavela eLangeni. Kukhona ukuqhunyiswa kwamabhomu ezinhlayiya ze-subatomic ezivela eLangeni ezakhiwa izivunguvungu zelanga. Lezi zinhlayiya zisukela kokunsomi kuya kobomvu. Umoya welanga uguqula izinhlayiya futhi lapho zihlangana namandla kazibuthe womhlaba ziyaphambuka bese kubonakala ingxenye yazo kuphela ezigxotsheni.
Ama-electron akha imisebe yelanga akhiqiza ukukhishwa okubonakalayo lapho efinyelela kuma-molecule egesi atholakala ku-magnetosphere (ingxenye yomkhathi womhlaba evikela uMhlaba kusuka emoyeni welanga, futhi kubangele ukuheha ezingeni le-athomu okuholela ekukhanyeni kwe-luminescence. Lokho kukhanya kusakazeka esibhakabhakeni, kuletha umbukwane wemvelo.
Kunezifundo eziphenya ngamalambu asenyakatho uma kwenzeka umoya welanga. Lokhu kwenzeka ngoba, yize izivunguvungu zelanga zaziwa ukuthi zikhona isikhathi seminyaka eyi-11, akunakwenzeka ukubikezela ukuthi i-aurora borealis izokwenzeka nini. Kubo bonke abantu abafuna ukubona amaLights aseNyakatho, lokhu kubhuza. Ukuhambela ezigxotsheni akushibhile futhi ukungakwazi ukubona i-aurora kuyacindezela kakhulu.
Uma into engokwemvelo yenzeka ezifundeni eziseduze kwesigxobo esisenyakatho, ibizwa nge-aurora borealis. Ngakolunye uhlangothi, uma kwenzeka ezindaweni eziseduze nepali yaseningizimu, kubizwa kanjalo i-aurora eseningizimu. Imvamisa, zenzeka ezinyangeni zikaSepthemba nango-Okthoba nangoMashi nango-Ephreli. Kulezi zikhathi kunomsebenzi omkhulu wamachaphaza elanga.
Izindawo ezinhle kakhulu ongazibona zikuzo INorway, iSweden, iFinland, i-Alaska, iCanada, iScotland neRussia. Ingabonakaliswa ngandlela thile njengezindawo zokukhanya, imivimbo ohlangothini oluvundlile noma enezimo eziyindilinga. Zingaba nemibala ehlukene kusuka kokubomvu kuye kophuzi, ngokuluhlaza okwesibhakabhaka noluhlaza okotshani.
Imiphumela ye-aurora borealis
Lo mkhuba, okhiqizwa izinguquko ezingazelelwe emkhakheni kazibuthe weSanga, wehla inani elikhulu lamandla elingena kwiplanethi yethu. Ngakolunye uhlangothi, isinikeza le micimbi emihle yemilingo nebukekayo, kepha ngakolunye uhlangothi, isithinta kabi.
Imimoya yelanga engena kwiplanethi yethu ikhiqiza ukuphazamiseka kwabezindaba (thinta amasiginali wethelevishini, ucingo, iziphuphutheki, ama-radar kanye nezinhlelo ezahlukahlukene zogesi). Lokhu kubangela ukuthi ukuxhumana kuphazamiseke, kepha akukho sikhathi lapho kungaba yingozi esintwini.
Izibani zaseNyakatho eNorway
Njengoba kushiwo ngaphambili, iNorway ingenye yezindawo ezifanele kakhulu emhlabeni ukubona i-aurora borealis. Yindawo lapho lesi simanga semvelo esiyimfihlakalo nesomlingo singabonakala khona kalula.
Kunezinganekwane eziningi ngenxa yalesi simo semvelo, njengenganekwane yamaViking ehlobanisa Izibani ZaseNyakatho nazo ukubonakaliswa kwezihlangu zamaqhawe eValkyrie.
Yize kungabonakala ezindaweni ezahlukahlukene zezwe, izindawo ezihamba phambili zitholakala ngaphezu kwe-Arctic Circle eNyakatho yeNorway. Ikakhulu ungabona ibhande le-auroras ngu iziQhingi iLofoten futhi iyaqhubeka ngokugudla ugu iye eNyakatho Kapa.
Lezi zindawo zikulungele ukubona amalambu aseNyakatho ngokusemandleni awo. Kodwa-ke, uma sifuna ukuhlala emhlabeni, sinethuba elingcono lokuthi isimo sezulu somile futhi asikwazi ukubonwa kahle. Ugu lunezinzuzo zalo, noma kunjalo. Futhi ngukuthi imimoya ivame kakhulu futhi iyakwazi ukushiya isibhakabhaka sicace ngokubonakala okukhulu.
Yize iNorway iyindawo lapho ungabona kahle khona iLights Lights, akusho ukuthi singalwazi usuku, indawo nesikhathi esiqondile okuzokwenzeka ngaso. Amathuba makhulu kakhulu phakathi kwama-equinox ekwindla nasentwasahlobo, okungukuthi, phakathi kukaSepthemba 21 noMashi 21.
Konke ukulinda kunomvuzo. "Izibani ezisenyakatho" zivame ukwenzeka kakhulu ekwindla nasebusika. Ngakho-ke, izinyanga ezinhle kakhulu zokuzigcina zingo-Okthoba, Februwari nangoMashi. Kulezi zinyanga, ubusuku be-polar bude futhi izinsuku ziya ngokuya ziba zide.
Isici esinqumayo lapho kubhekwa lesi simanga esimangazayo isimo sezulu samanje. Ngaphambi kokuhlela uhambo oluya eNorway, kubalulekile ukwazi izimo zezulu ezizokwenzeka ezinsukwini ezizayo. Uma kubikezelwa imvula, uthathe uhambo ngeze. Ukugwema lolu hlobo lwesimo, kukhona ezinye izinhlelo zokusebenza ze-alamu yemvula ezokuxwayisa ngemvula ezoba khona endaweni ozoya kuyo.
Uma ekugcineni ukwazi ukubona amaLights aseNyakatho, konke kuzobe kukufanele. Kungumdlalo omangalisayo ngazo zonke izindlela. Abantu baseNyakatho Norway banezibani zaseNyakatho njengengxenye yezimpilo zabo. Noma kunjalo, zisebenza njengogqozi lwabaculi, izinganekwane nezinganekwane. Ososayensi bathi umvuthwandaba wamalambu asenyakatho usuphelile nokuthi sizobona kancane kancane. Ngakho-ke, kuyadingeka ukusebenzisa ngokunenzuzo ukubona lezi zimo ngaphambi kokuba imvamisa yazo inciphe futhi incane.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Uzozibona kanjani futhi nini izibani zaseNyakatho zaseNorway
Ziyini futhi zakhiwa kanjani izivunguvungu nombani?
Kungani amaconsi amafomu wamanzi futhi angabunjwa bunjani?